Ogaden News Agency (ONA) – Xuskii sanadguurada 31aad ee Jwxo oo Lagu qabtay Toronto Canada iyo mudane c/qaadir hirmooge (cadaani) oo ka qayb galay.
Xuskii sanadguurada 31aad ee Jwxo oo Lagu qabtay Toronto Canada iyo mudane c/qaadir hirmooge (cadaani) oo ka qayb galay.
Posted by ONA Admin	/ August 31, 2015
Jaaliyada Somaalida Ogadenia ee Gobolka Ontario ee dalka Canada waxay maalinimadii sabtida ahayd ku qabteen magaalada Toronto munaasabad lagu xusayo sanadguuradii 31aad ee aasaaska Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadeniya (JWXO). Waxaa shirkan xidhiidhinayey mudane maxamed cumar ( najiib) waxaana lagu furay wacdi diini ah oo uu soo jeediyey Sheekh C/shaafi.
Shirka Waxaa qudbad aad u qiimo badan kasoo jeediyey gudoomiyaha jaaliyada Toronto Maxamed Qamaan Tube oo ka warbixiyey xaalada jaaliyada wixii u qabsoomay,waxay higsanayaan iyo xidhiidhka ay la leeyihiin bulsha weynta soomaaliyeed iyo ta Somalida Ogadeniya. Waxaa sidoo kale taa mid lamid ah kasoo jeediyey gudoomiyaha jaaliyada Kitchiner Shekh Aadan Faarax.
Waxaa madasha Lagu soo dhaweeyey afhayeenka JWXO ahna Gudomiyaha Hogaanka Abaabulka iyo Arimaha Jaaliyadaha (HAAJ) mudane C/qaadir Xasan Hirmooge (Cadaani) waxaana hoolkii shirka is qabsaday sawaxan iyo sacab lagu soo dhaweynayo Halgame Cadaani.
wuxuuna halkaa ka jeediyey khudbad aad u qiimo badan oo dhinacyo badan taabanaysay ,wuxuu ka hadlay maanta halganka ogaadeeniya meesha uu maraayo siyaasiyan iyo caskariyan labadaba wuxuu ku dheeraaday siyaasada geeska afrika,burburka ku soo fool leh dawlada Ethiopia ee aan cidina dafiri Karin ,shacabka gudaha ogaadeeniya waxay ku sugan yihiin iyo ciidanka wadaniga xoreynta ogaadeeniya.
Wuxuu kaloo carabka ku dhufutay wada hadalada u dhexeeyey Jwxo iyo Ethiopia meesha ay marayaan , siyaasada Jwxo iyo mowqifkeeda cad ee ku wajahan xornimo gaadhsiinta shacabka dulman.
Gudoomiyaha Waxaa la waydiiyey su’aalo aad u fara badan wuxuuna uga jawaabay si waafi ah oo ay ku wada qanacsanaayeen dadweynihii shirka ka soo qayb galay.
Waxaa shirka hadalo dhaxal gal ah ka jeediyey oday dhaqameedyada soomaalida ogaadeeniya ee ku nool gobolka Ontario waxayna aad uga hadleen midnimadu in ay tahay waxa kaliya ee aynu kaga guulasan karno cadawgeena waana in aynu ilaalinaa midnimadeena si aan umadeena u gaarsiino xornimo taam ah,muujinaana cududeena.
Waxaa halkaa suugaan halgameed aad u qurux badan ka soo jeedisay gabadh(roodo) yar oo ka mid ah gabdhaha soomaalida ogaadeeniya ee ku dhaqan magaalada Toronto .
Isku soo wada duub oo munaasabadaa Lagu xusayey sanadguurada 31aad ee Jwxo iyo waftigaa heer sare ah ee ka soo qayb galayba wuxuu ku soo dhamaaday jawi aad u qurux badan.